कसरी बन्यो एचटिसी ? – HamroKatha
कसरी बन्यो एचटिसी ?
सफल महिला उद्यमीले टेक्नोलोगीमा हात हाल्दा जन्मियो एक अन्तराष्ट्रिय ब्राण्ड एचटिसी
हाम्रो कथा २०७६ असार २८ गते १४:३०
यो कथा ताइवानकि एकजना यस्ती धनि महिलाको हो जो फोर्ब्सको शक्तिशाली महिलाको सुचिमा परिरकेकी छिन् I आफ्नो सपनालाई पछ्याउदै जाँदा एकजना महिलाले पनि कुन हद सम्म प्रगति गर्न सक्छ भन्ने कुरा यो कथाले देखाउँछ I
यो कथा चेर वङको हो । जो सफल महिला उद्यमीको रुपमा विश्वविख्यात छिन् । उनको जन्म सन् १९५८ मा चीनको ताइवानमा भएको थियो । उनी एक सफल व्यापारीक घरानामा जन्मिएकी थिइन् । उनको पिताको देहान्त हुनुअघिसम्म पनि उनी ताइवानको दोश्रो धनि व्यक्तिको रुपमा थिए । त्यसैले उनको शिक्षा दिक्षा क्यालिफोर्नियामा भएको थियो ।
बक्र्ले कलेज अफ म्युजिकमा पियाने पढ्ने रहर भएकी चेर पछि सन् १९८१ मा युनिभर्सिटि अफ क्यालिफोर्नियाबाट इकोनोमिक्स्मा ग्य्राजुएट भइन् । र सन् १९८२ मा उनी फस्र्ट इन्टरन्यासनल कम्प्युटरमा जागिर गर्न थालिन् । उनी त्यहाँ मदरबोर्ड बेच्ने काम गर्थिन् । तर ग्राहकको सेवा गर्दागर्दा उनलाई कामबाट बेचैनी हुन थालेछ । अनि उनले सपना देख्न थालिछिन् । यति ठूलो कम्प्युटरको साटो सानो मोबाइल फोन भइदिएको भए ग्राहकसँग डिल गर्न कति सहज हुन्थ्यो होला भनेर ।
र सन् १९८७ मा उनले केहि साथीसँग मिलेर वीआइए टेक्नोलोजिज नामको कम्पनि स्थापना गरिन् । जसले मदरबोर्ड, सिपियु र मेमोरी निर्माण गथ्र्याे । सन् १९९२ बाट यसलाई उनको श्रीमान्ले सम्हाल्दै आएका छन् । तर चेरको खास उद्देश्य भनेको हातमै राखेर चलाउन मिल्ने कम्प्युटर अर्थात् मोबाइलको निर्माण गर्नु थियो ।
हो यहि उद्देश्यका कारण साथि पिटर चो सँग मिलेर उनले सन् १९९७ मा एउटा ब्राण्डको स्थापना गरिन्, जसको नाम रह्यो ‘एचटिसि’ । अर्थात्, हाई टेक्नोलोजी कम्पनि ।
सुरुसुरुमा त कम्पनिले नोटबुक कम्प्युटर उत्पादन गर्न थाल्यो तर पछि आएर एचटिसि विश्वकै पहिलो टच स्क्रिन तथा वायरलेस ह्याण्ड हेल्ड डिभाइस निर्माण गर्ने कम्पनि भयो ।र स्मार्ट फोन निर्माणमा हात हालेको पहिलो वर्ष नै उनको कम्पनिको सेल्स् २५ प्रतिशतले बृद्धि भयो । यसले कम्पनिलाई स्मार्ट फोन निर्माण गर्ने स्तरमा पु¥यायो । हाल अमेरिकामा विक्रि हुने हरेक ६ वटा स्मार्ट फोनमा एउटा फोन एचटिसिको हुन्छ ।
एचटिसिलाई ग्लोबल ब्राण्ड बनाउन उनले हरतरहको प्रयास र अभ्यास गरेकी छिन् । एचटिसिको अधिकांश फोनमा माइक्रोसफ्टको ओपरेटिङ सिस्टम हुने भएकाले माइक्रोसफ्टसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न उनी हरेक वर्ष विल गेट्सलाई भेटिरहन्छिन् ।
सन् २०१५ मा उनले आफ्नो कोफाउण्डरलाई अपदस्त गरेर आफैं कम्पनिकी सिइओ भइन् र डे टु डे अपरेसनमा सक्रिय भइन् । सन् २०१७ मा उनले गुगलसँग मिलेर १ विलियन डलरभन्दा बढिको साझेदारी गरिन् ।एचटिसिको अफिसियल वेवसाइटका अनुसार एचटिसिको कुल पुँजी झण्डै २८ करोड अमेरिकि डलर बराबरको छ । झण्डै १३ हजार कामदारले यहाँ काम गर्छन् ।उनको कुल सम्पत्ति एक अरव १० करोड अमेरिकि डलर बराबरको छ । र उनलाई फोब्र्सले शक्तिशालि महिलाको रुपमा ५४ औं स्थान पनि दिएको छ । फोब्र्सकै अनुसार उनको र उनको श्रीमानको समेत गरेर कुल सम्पत्ति करिव ३ अरव ५० करोड अमेरिकि डलर बराबर छ ।